Sidii Aanu Isu Fahannay. Qalinkii: Cabdishakuur Heersare | Tvsomalilandeurope
Posted on May 30, 2016 by tvsomalilandeurope.net in Uncategorized // 0 Comments
Markii aanu soogalnay waanu yara naxnay. Waayo? Waxa aanu ka soo baxnay shaqo oo waxa aanu rabnay in aanu nasanno oo bun iyo sharaab aanu cabno. Mar keliya ayay indhahayagu qabteen saf arday ah oo dheegga isku haysa. Iska fadhiisannay. Waxa aanu u haysannaa markii ay ardaydu arkeen nimanka kamaradda sita ee soo galay inay aamuseen. In yar ka dib, ayaanu dareennay in arrinku sidii aanu moodaynnay aanu ahayn. Waxay indhahayagu qabteen ardaydii oo faraha ku sheekaysanaysa. Waxa aanu garwaaqsannay inay yihiin arday maqalka naafo ka ah.
Intii aanu is eegaynnay ayuu soo dhawaaday waqtigii ay imtixaanka gelayeen oo saacaddu waxay ku sii durkaysay 11kii maalinnimo. Xamse Cali Jeesto oo aanu wada soconnay ayaan ku qanciyey in aanu sawir xuxuus ah ka reebno ardayda. Waxa aanu gudagalnay in aanu u sheegno in aanu rabno sawir. Weliba sawir xusuus ah in aanu ka qaadno. Aniga ayaa faraha uga tilmaamay oo waxa aan u muujiyey astaanta sawirqaadista iyo in aanu rabno inaanu sawir ka qaadnayno. Markiiba mid ka mid ahaa ayaa faraha nooga sheegay diidmo culus. Weli annaga oo aan quusan ayaanu arday kale faraha uga yeedhnay. Waxa aanu ka codsannay inuu noo dhiibo buug uu sitay. Waxa aanu ugu qornay qoraal kooban oo sheegaya in aanu sawir xusuus ah ka qaadaynno. Muddo dhawr miridh ah ayay ku qaadatay inay ka doodaan soo jeedintii, iyaga oo faha ka sheekaysanayay. Waxa noo muuqatay in lagu kala qaybsamay codsigii aanu u gudbinnay. Go’aan hordhac ahaa oo nala siiyey ayaa diidmo na loogu muujiyey.
Waxa aanu dareennay inay muhiim tahay barashada farta suuldhabaalaha ee loo yaqaanno “Sign Language” ee dadka maqalka naafada ahi ku wada xidhiidhaan kuna sheekaystaan.
Beauty Fashion & Praise on xuska 26 June iyo Heestii Dhaaxaan oo uu sameeyey Abwaan Cali Sugulle kuna luuqaynayo Maxamed Saleebaan Tubeec
fifa 55 on Gudoomiyaha Ururka Dhakhaatiirta Somaliland Oo Shircaalamiya Oo Uu Kaga Qayb Galay Turkiga Ka Warbixiyay (Sawiro).
ed hardy clothing outlet on Toos u daawo: Shirar looga hadlayo arrimaha Soomaaliya Ee Maanta ka furmay Magalada London.
datacentre equipment disposal on Daawo Dablay Hubaysan Oo Weerartay Midkamida Xaafadaha Burco
Education research on Qabiilo aan weli Dabka La Shitaa Gaadhin (Xogta Dahsoon)